passport ရုံးမှအပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » passport ရုံးမှအပြန်
Posted by myanmarcitizen on Dec 13, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
မကြာခင်လေးက Passport သက်တန်းတိုးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ သိပ် ဘ၀င်မကျတာလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လက်ရှိအစိုးရက clean government ဆိုပြီးတော့သာ အော်နေတယ် သူ့ဝန်ထမ်းတွေ ကတော့ ပိုက်ဆံလေး ပေးမှလုပ်တာ ဟာ အကျင့်ပါနေပါပြီ။
စ၀င်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပိုက်ဆံသွင်းရတယ် 5000 ကျပ်ပါ။ နောက် လျောက်လွှာက 1000 ကျပ်ပါ။ နောက် မြန်မာ့စီးပွားရေဘဏ်မှာ 20000ကျပ်(၀န်ဆောင်က ၁၀၀၀ ပါ) passport ဖိုးဆိုပြီးသွင်းရပါတယ်။ အဲ့အထိ နားလည်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး စာအုပ်အဟောင်းကို အခွန်သွားစစ်ရပါတယ် 1 နာရီလောက် ထိုင်စောင့်ရပါတယ်။ အခွန် ကင်းရှင်းကြောင်း စာရွက်လေး ထုတ်ပေးပါတယ်။ 1000 တောင်းပါတယ်။
နောက် ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံ သွားရွေးပါတယ်။ မရသေးဘူးပြောပါတယ်။ ခနစောင့်ပါတယ်။ နောက်သွား ရွေးကြည့်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံထုတ်ပေးပြီး 500 ပေးပါတောင်းပါတယ်။ မိန်းကလေး ရဲမေပါ။ (မတောင်းတဲ့သူတွေကိုမတောင်းပါ)။
ဓါတ်ပုံကပ်ပါတယ် ပြီးတော့ form စီရမယ်ဆို့လို့ 3ရက်နဲ့ ရဲ တွေထိုင်နေတဲ့ နေရာကိုသွားပြီး စီခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့မှာ လဲ 1000 ပေးရပါတယ်။
နောက် Token ယူတဲ့နေရာကို လမ်းညွှန်လို့ Token သွားယူပါတယ်။ 1000 ထပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။
နောက်ဆုံး form သွားတင်တော့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း မှုရင်းပေး ရပါတယ်။ slip ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာပါ။3ပွင့်တဲ့ ၀င်းနိုင်ဆိုတဲ့ရဲက ရင့်ပါတယ်။ လူကိုခေါ်တာ “ဟေ့ကောင်” တဲ့ ကဲဘယ်လောက်ဆိုးလဲ။ မေးပါတယ် မင်းအဖေနာမည်ဘယ်သူလဲ ?? မင်းဘာလုပ်ဖို့နိုင်ငံခြားကို သွားခဲ့တာလဲတဲ့ ??? ဘယ်လောက်ကြာလဲတဲ့ ??? တာဝန်အရမေးတာဆို ရင်တော့မေး နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် passport လာလုပ်တဲ့ သူက တရားခံမဟုတ်တဲ့အတွက် စကားသံလေးကိုတော့ ပြေပြေလည်လည်မေးသင့်ပါတယ်။ နောက်မရှက်တဲ့မျက်နှာ နဲ့ 2000 တောင်းပါတယ်။ ခနစောင့်နေတော့ slip ရပါတယ်။ (3 နှစ်တစ်ခါတော့ မကြည့်ချင်တဲ့မျက်နှာတွေကို လာလာ ကြည့်နေရအုန်းမှာပဲ)
ကျွန်တော်သိချင်တာက (1-5) အထိတောင်းတာက ဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုသိချင်တာပါ။ ဘဏ်ကို passport ဖိုးပေးသွင်းပြီးပြီပဲ။ နောက်ထပ်ဘာထပ်တောင်းစရာများ ရှိနေသေးလို့လဲ ။ တာဝန်ရှိ ပါတယ် ဆိုတဲ့ တံဆိပ်လဲ လည်ပင်းဆွဲထားတယ် ၊ ၀တ်စုံပြည့်လဲ ၀တ်ထားသေးတယ် .. အဆင့်အတန်းကတော့ ဖြင့် မပြောလိုက်ချင်တော့ပါဘူး။
Clean government လို့သာပြောနေတယ် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ပြန်မေးကြည့်ပါ ငါ့အိတ်ကပ်ထဲက ငွေတွေက သန့်ရှင်းရဲ့လား ဆိုတာကို ?? မိမိကိုယ် ပြန်ပြီးမေးကြည့်ကြပါ။ ပိုက်ဆံပေးလိုက် ရင် အားလုံးအဆင်ပြေ ပြီး ပိုက်ဆံမပေးရင် အလုပ်မလုပ် အမျိုးမျိုး ပြသနာရှာပြီး ရစ် တာကကော ဘယ်သူတွေပါလဲ။ အများကြီး ကြုံတွေ့ဘူးပါတယ်။
နောက် ပြောစရာရှိတာက passport life-time ပါ။ သူများနိုင်ငံတွေ မှာ ဘယ်လောက်ရလဲ ရှာကြည့်လိုက်တော့(အတိအကျ မှန်ချင်မှ မှန်ပါလိမ့်မယ် ရှာတွေ့တာကို ဖော်ပြထားတာပါ) အဲ့လိုတွေ့တယ်ခင်ဗျ ..
16 or Older – 10 Years
15 or Younger –5Years
For renewal applications: Passports issued will be valid for (5 years + remaining validity capped at9months*)
အော် သူတို့ကြ5နှစ်ရပြီး (malaysia ကိုပြောတာပါ :-)) ကိုယ်တွေကျတော့3နှစ် တဲ့ဗျား …..
Passport အကြောင်းကတော့ ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူး … ။
ဟိုးတလောက အီးမေလ်ထဲမှာ 2010 က လျှောက်ပြီး စာအုပ်လာမထုတ်တဲ့ လူတွေကို ဖျက်သိမ်းပစ်မယ်လို့ … ရေးထားတွေ့လို့ အမိအရလေး ပြေးထုတ်လိုက်ပါတယ် … သေချင်စော်နံသွားတယ် … ။
ပိုက်ပိုက် ရလျှင် မျက်နှာက တမျိုး ၊ ပိုက်ပိုက်မရလျှင် မျက်နှာက တမျိုးနဲ့ …. ။
ဒီဇင်ဘာ 31နောက်ဆုံးဆိုလို့ …. အချိန်သိပ်ဆွဲလို့ မရတော့တာကြောင့် ပြေးလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ် … ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်ဆိုလျှင် …. pending ထားပြီး … လိုတော့မှ ပြေးထုတ်မယ်တွေးနေတာ … ။
ခဏခဏ လဲရမယ် ဆိုမှ ခဏခဏ ပိုက်ပိုက် ရမှာလေ .. ဒါကြောင့် ၃ နှစ် လို့ သတ်မှတ်တာ
ဖြစ်နိုင်ရင် နှစ်စဉ် လုပ်စေချင်တာ
ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်လူအများစုက စည်းကမ်းဖျက်ကြတာလည်းပါတယ်ဗျ ။ နောက်မှရောက်လာပြီး တန်းစီဖို့လည်း မစဉ်းစား ။ မြန်မြန်ရအောင် ပိုက်ဆံ တင်ပေးနဲ့ ။
အားလုံ စည်းကမ်းရှိရှိ မပေးကြ ၊ တန်းစီယူကြရင် ဒီလောက် အတင့်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး ။ အခုတော့ အတင်းကျော်ခွပြီး တောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းပေးပြီး ယူနေကြတော့ မပေးတဲ့သူဆိုတောင်းတဲ့ အဆင့် ဖြစ်လာရော..
အားလုံးညီရင် တန်းစီ ၊ တစ်ယောက်ပြီးမှ တစ်ယောက်ထုတ် ၊ တောင်းရင် ဘာအတွက်တောင်းတာလည်း အားလုံးမေးရင် လုပ်ရဲတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒီလို သည်းခံတန်းမစီတတ် ကြတဲ့ အတွက် သူတို့ ဂွင်ထဲရောက်ကုန်တာ။
အဲ့ဒီ့ရုံးတွေ ရောက်ရင် တိရစ္ဆာန် တွေလို အတင်းတိုး ဝှေ့နေကြတာ ကို ပို ရွံတယ်။
clean government ကအခုမှ လုပ်တုံးနဲ့တူပါရဲ့၊
အဲဒါဖြစ်ချင်ရင်တော့ လူတိုင်းရဲ့ လစာ ဟာ လူတိုင်းအတွက် လုံလောက်မှဖြစ်မှာပေါ့၊
အခုတော့ကုန်ဈေးနှူန်း မချနိုင်လို့ ဒေါ်လာကိုတောင် ဈေးပြန်တက်အောင် လုပ်နေပုံနဲ့ဆို မလွယ်သေးဘူး။
လစာတိုးလဲ ဈေးနှူန်း မတက်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလေ၊
အဆင့်အတန်းကတော့ ဖြင့် သူတောင်းစား
သူ့ ခဗျာ လဲ အဲဒီ့နေရာလေး ကို ရဖို့ 
အလှူခံ ပုံး အဆင့်ဆင့် ထည့်လာရရှာတာပါအေ ရဲ့ 
new, renew passport လုပ်တာ အရင်ကထက်တော့ ပိုမြန်သွားပြီ။ ၀န်ထမ်းတွေအကျင့်ကတော့ မပြင်နိုင်သေးဘူး။ (ကျွန်တော် စလုပ်တုန်းကဆို ၄ ရက်လောက်လုပ်မှ slip ထွက်တာ :-))။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကလဲ စည်းကမ်းတကျလေး တန်းစီတဲ့စနစ်က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၀ိုင်းတိုးနေကျတော့ အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာပဲ ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ၁၉ သွားလုပ် တုန်းပိုဆိုးပါတယ်။ အပေါက်ဝလေးကို နဲနဲ ပဲဟပေး ထားတာ ကို ၀ိုင်းတိုးနေကြတာ။ အဲ့နေရာမှာစနစ်တကျတန်းစီရင် ပိုမကောင်းကြဘူးလား။ စည်းကမ်းမရှိ ရေသာခိုချင်တဲ့သူတွေကြောင့် စည်းကမ်းရှိချင်တဲ့သူတွေလဲ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ ဘ၀ကို ရောရောက်ကြရတယ်။ သူတိုးတော့ ကိုယ်လဲတိုးရရောလေ အဲ့နေရာမှာ ကိုယ်က စနစ်ကျနေရင် ဘယ်လိုလုပ် ရှေ့ရောက်တော့မလဲ :-) ။ ရုံးက လူကြီးတွေကလဲ ဒါမျိုးကျ စိတ်မ၀င် စားပဲ “အာလကေ” ပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ (ပြောင်းချိန်တန်နေကြပါပြီ)
အင်း လုပ်ချင်တော့လည်း ပေးရမှာပေါ့လေ။ လုပ်မထားတော့ မပေးရဘူးပေါ့။ ဟီး ဒီတော့မကုန်ကျတော့ဘူး။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ … :-)